Kumwaya gadheni: iwo akanakisa matipi uye dzimwe nzira | Green Renewables
Fungidza gadheni remuriwo
ChiGerman Portillo | | Imba yeGreen
Isu tinoziva kuti kana mamiriro ekunze akanaka achisvika munofanirwa kunyatsoteerera kubva pakurwiswa kwezvipembenene nezvirwere. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti udzidze matipi akanakisa ekumesa gadheni. Kune vanhu vazhinji vanobvaruka pakati pekuda kuita fumigate munda wemichero uye kurwira zvipenyu nezvipuka zvinopinda.
Muchinyorwa chino tichaenda kukuudza kuti ndeapi matipi akanakisa ekuti mupeze gadheni uye zvaunogona kuita kuti gadheni rirambe rakamira zvakanaka.
1 Inoda kufutisa munda wemichero
2 Mhinduro dzemusha
3 Nzira dzezvipembenene uye zvirwere
4 Matipi ekumwaya gadheni
Inoda kufutisa munda wemichero
Chinangwa chikuru chekumwaya gadheni ndechekudzivirira kurwisa kwese tupukanana nezvirwere kuitira kuti zvirimwa zvako zvichengetedzwe zvakanaka. Kuti tive nemiti iri mumamiriro akanaka tinofanira kuziva kwazvo hunhu hweavo vatiri kukura kudzivirira kurwisa kwezvipembenene nezvirwere pasina kudikanwa kwekudiridza hutsi. Semuenzaniso, isu tinofanirwa kuziva gadziriro yakakwana yeivhu reminda, yekudiridzira uye nguva yekusangana, nzvimbo, tembiricha, nezvimwe. Kana tikagadzira chirimwa chedu kana zvirimwa zviri mumamiriro akanaka uye akakwana, hazviwanzo kuitika kuti zvinorwiswa netupukanana nezvirwere.
Imwe nzira yekudzivirira kupfapfaidza gadheni kushandisa nzira yekutenderera yezvirimwa. Izvo zvakare zviri nyore kuchengetedza nzvimbo yese isina masora uye marara emubindu. Dzese dzenzvimbo idzi matura akakwana ezvipembenene. Kune mhuka dzinobatsira dzinodya zvimwe zvipembenene zvinogona kukuvadza. Kushandiswa kwezvipembenene nenzira yakasikwa kunonzi biological pest control. Semuenzaniso, iyo ladybug inodya zvipembenene zvemaaphidhi evakuru nemaruva. Zvimwe zvipembenene izvo anoshandiswa kudzora zvipenyu tupukanana ndiwo anonamata mantis, madzvinyu, matohwe, madandaude, matatya, centipedes, Etc.
Imwe zano yekudzivirira kumwaya gadheni rako kukwezva shiri kugadheni rako. Iwe unogona kushandisa nesting mabhokisi, vanodyisa uye vanonwa kuitira kuti shiri dzigare mubindu rako. Shiri dzinokwezvwa kuma conifers uye shrub senge bhuruu, holly uye mablackberries, pakati pevamwe. Neshiri dziri padivi rako, unogona kurwisa huwandu hwakawanda hwezvipembenene.
Kana paine zvinodzokororwa girobhu zvipukanana tupukanana gore negore, unogona kuisa zvidiki zvekudzivirira. Nenzira iyi, iwe unodzivirira kuisa yakawandisa makemikari aya anogona kukanganisa kunaka kwemvura nevhu.
Imwe yemhinduro dzakagadzirwa zvakanyanya mumusha inzira yefodya. Uye ndezvekuti iwe unogona kushandisa magiramu makumi mashanu efodya muretita remvura uye wedzera magiramu gumi esipo chena. Zvese izvi zvinogona kumwayiwa pamiti yedu kudzivirira kurwisa kwezvipembenene zvakadai semamealybugs, hove uye mamwe makonye.
El Bacillus thuringiensis ibhakitiriya iyo inouraya zvipembenene munzvimbo yadzo yemarota semakonye uye inotengeswa muhari sekunge yaive chigadzirwa chakajairwa nehuswa. Hutachiona uhwu hunogona kuva imwe nzira yekurwisa tupukanana nezvirwere muzvirimwa zvako. Unogona kushandisa sipo inouraya zvipembenene nekusanganisa sipo, mafuta, uye mvura kubata nezvipembenene zvese zvine muviri. Zvirimwa zvinofanirwa kunyoroveswa kuti sipo iyi ishande. Hazvikurudzirwi kushandisa sipo yemumba pamwe nezvinomera.
Sarufa inoshandiswa kurapa fungus ye powdery mildew uye ine chiito chakanaka kurwisa mite.
Nzira dzezvipembenene uye zvirwere
Ngatione kuti ndedzipi nzira dzakasiyana dzezvipembenene nedziviriro yezvirwere zvinogona kuitwa mubindu nemubindu rako:
Chemical kupuruzira: zvipembenene, acaricides, fungicides, nezvimwe zvinouya muno.
Kufungidzira nezvakagadzirwa zvigadzirwa: kune makemikari akagadzirwa kana makemikari akaomeswa uye fungicides anogona kuve nemhedzisiro yakafanana nemakemikari.
Chinyorwa kubatwa kwezvipembenene: Iyi nzira inongoshandiswa chete kana hutachiona hwakakura uye husina kunyanya kuwanda.
Biological pest kudzora: ine chekuita nezvese zvataurwa pamusoro apa nezve kuunzwa kwezvipembenene neshiri dzinogona kudzora zvakasununguka kupararira kwezvipembenene zvinokuvadza.
Matipi ekumwaya gadheni
Kana iwe usina imwe sarudzo uye iwe uchifanirwa kufefetedza gadheni, isu tichaenda kukuudza mamwe emazano akanakisa:
Shandisa chigadzirwa chaicho: Inofanira kunge iri yekuona chipembenene chiri kurwisa zvirimwa zvedu kuti tishandise chigadzirwa chakakodzera uye nekunyatso bvisa utachiona. Iwe unofanirwa kutsvaga zvakanyanya chaizvo kuti ndeipi chirimwa chekudzivirira chigadzirwa chauchazoshandisa.
Shandisa musanganiswa kudurura nguva: Zvinokurudzirwa kusachengeta zvigadzirwa zvatove zvakasanganiswa nemvura nekuti nekufamba kwenguva zvinorasikirwa nekushanda. Izvo zvinodikanwa kuti uverenge zvakaringana huwandu hwenzvimbo yechigadzirwa chechipfuwo icho chinodiwa kugadzirisa musanganiswa mushe uye woishandisa panguva ino.
Usasase zvirimwa muzuva rose: kana ukaita fumigation muzuva rose unogona kukuvadza chirimwa kana zvirimwa zvakarapwa. Iyo yakanakisa nguva yekupepesa gadheni ndiyo yekutanga yekupedzisira nguva yezuva.
Usashandise zvigadzirwa zvakavhurika zvehutano: zvimwe kana zvishoma zvigadzirwa zvehutano zvine huwandu hwemakore akati wandei. Iyo inowanzo kurasikirwa nekushanda uye inogona kukuvadza kune yako zvirimwa.
Isa zvigadzirwa zvehutano nehupfapfaidzo: chipfapfaidzo chinoita kuti basa riwedzere kukurumidza, nyore uye kugadzikana pamwe nekuwedzera kushanda.
Hazviwanzo kurudziro kupuruzira: Sezvatakambotaura, zvinonakidza kuti kumberi kudzidza kana zvichidikanwa kushandisa zvigadzirwa zvehuswa kuputa zvirimwa. Inofanira kuitwa apo zvipembenene zvinokanganisa zvirimwa zvazove chipembenene.
Imwe nzira: Izvo zvakakosha kuti usarambe uchishandisa zvakafanana phytosanitary chigadzirwa sezvo zvipembenene zvakarapwa zvinogadzira kuramba kuzvigadzirwa uye kuva immune. Zvese zvinotevera zvinoshandiswa hazvishande uye zvinokuvadza ivhu.
Chenesa sprayer: Mushure mekutsvaira gadheni, zvinodikanwa kuchenesa mabhegi kana mapiritsi anoshandiswa kupepesa nesipo yechisikigo. Izvo zvinodikanwa kuisuka, kuinanzva uye kuiwana zvakare nemvura.
Ruramisa iyo pH yemvura: Iyo pH yemvura inofanira kunge iri chaiyo kuitira kuti zvipembenene, miticides uye fungicides zvigare kwenguva refu mumiti.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve nzira yekufusira gadheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Fungidza gadheni remuriwo
Mhizha ine zvishandiswazve zvigadzirwa